FOS-P1: ကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားနေသော Facebook Open Source ကိုလေ့လာခြင်း - အပိုင်း ၁ | Linux မှ
ဒီနှင့်အတူ အပိုင်း အပေါ်ဆောင်းပါးများ၏စီးရီးကနေ "ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် " ကျနော်တို့ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ကြီးထွားလာ၏ catalog ကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းစတင်ပါလိမ့်မယ် အက်ပ်များကိုဖွင့်သည် ကတီထွင်ခဲ့သည် နည်းပညာဆိုင်ရာiantရာမ de «ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ".
"ယနေ့အများပိုင်နှင့်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများသည်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်နှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်များကိုသူတို့၏စီးပွားရေးပုံစံများ၊ တစ်နည်းဆိုရသော် လွတ်လပ်၍ ပွင့်လင်းသောနည်းပညာများသည်၎င်းတို့ပိုင်ရှင်များ၊ ဖောက်သည်များသို့မဟုတ်နိုင်ငံသားများ၏အကျိုးစီးပွားအတွက်၎င်းတို့ထဲမှအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထွက်ခွာခြင်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။" GAFAM Open Source - နည်းပညာအရင်းအမြစ်များကို Open Source ၏မျက်နှာသာပေးသည်
1 FOS-P1: Facebook Open Source - အပိုင်း ၁
FOS-P1: Facebook Open Source - အပိုင်း ၁
စတင်ခြင်းမပြုမီတရားဝင် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုသတိပြုသင့်သည် Facebook ၏ Open Source (FOS) ၎င်းကိုမီးမောင်းထိုးပြထားသောအပိုင်း (၁၀) ပိုင်းခွဲခြားထားပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်၏ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုများသည် Facebook အက်ပ်များကိုဖွင့်ပါ, ကျွန်တော်တို့ကပထမတစ်ခုမှနောက်ဆုံးအပိုင်းအထိတစ်ခုချင်းစီကိုဖြတ်သန်းသွားမှာဖြစ်ပြီး၊ အပိုင်းတစ်ခုစီမှာရှိတဲ့ရှိပြီးသားအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုစီ၏အုပ်စုငယ်လေးကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
de la ပထမအပိုင်း ဖော်ပြခဲ့တဲ့ "Android"ဤစာရင်းသည်ပထမဆုံးသောအက်ပလီကေးရှင်းများဖြစ်သည်။
"Application များစွာအတွက် Hermes ကိုစတင်ခြင်းသည် startup time ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး memory အသုံးပြုမှုကိုလည်းလျှော့ချပေးလိမ့်မည်။ ယနေ့တွင် Hermes သည်ပြန်လည်သက်ဝင်နိုင်သည့် React Native feature တစ်ခုဖြစ်သည်။ "
React နှင့်အတူမူရင်း application များကိုတည်ဆောက်ရန်မူဘောင်။"
React Native သည် React ၏ကြေငြာချက် UI Framework ကို iOS နှင့် Android သို့ယူဆောင်လာသည်။ ၎င်းနှင့်အတူသင်သည်အသုံးပြုသူ၏ interface ကိုထိန်းချုပ်ပြီးမူလပလက်ဖောင်းကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများသို့မဟုတ်အားသာချက်များစွာတွင်၎င်းသည် code ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပြီး debug လုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသောအပြန်အလှန်အသုံးပြုသူ interfaces များဖန်တီးရာတွင်လွယ်ကူစေသောကြောင့်၎င်းသည် Declarative ဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အစိတ်အပိုင်းများကိုအခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းကိုထိန်းချုပ်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုစီမံခန့်ခွဲရန် encapsulated components များကိုတည်ဆောက်ရန်ရှုပ်ထွေးသော user interface များကိုဖန်တီးနိုင်သည်။"
"React Native သည်အဆင့်မြင့်သော iOS developer နှစ် ဦး စလုံးအတွက်သူတို့၏အလုပ်အကိုင်များအတွက်ပထမဆုံးအကြိမ်ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်းတွင်လူသစ်များကိုစတင်မိတ်ဆက်သူများကိုတုံ့ပြန်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ "
"mobile developer တွေအတွက် desktop debugging platform ။ "
"Flipper (ယခင် Sonar) သည် iOS နှင့် Android တွင်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများအားဖယ်ထုတ်ခြင်းအတွက်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းသော desktop interface မှ application များကိုကြည့်ရှုရန်၊ စစ်ဆေးရန်နှင့်ထိန်းချုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဒီဟာကို API ပလပ်အင်များမှတဆင့်အသုံးမပြုနိူင်ပါ။
"Flipper သည်ဒေတာများကိုအပြန်အလှန်ပေးပို့ခြင်း၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်တီထွင်ထားသောမိုဘိုင်း application ၏အဖြစ်အပျက်များကိုနားထောင်ခြင်းအတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်။ Flipper ၏ desktop app နှင့်ဇာတိ mobile SDK တို့သည် open source နှင့် MIT လိုင်စင်ရရှိထားသည်။ ၎င်းသည်လူအများကြည့်ရှုနိုင်ရန်နှင့်ပလပ်ဂင်များမည်သို့တည်ဆောက်ပုံကိုနားလည်စေပြီး၊ အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ပူးပေါင်းပြီး Flipper ကိုတိုးတက်စေရန်ကူညီသည်။ "
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ၏ဤပထမ ဦး ဆုံးရှာဖွေရေးအကြောင်းကို «Facebook Open Source», Technological Giant မှတီထွင်ထားသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကျယ်ပြန့်သောကျယ်ပြန့်သော application များကိုပေးသည် «Facebook»; တစ်ခုလုံးအတွက်, ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » FOS-P1: ကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားနေသော Facebook Open Source ကိုလေ့လာခြင်း - အပိုင်း ၁
ခြေရာခံ cookies များကို FLoC ဖြင့်အစားထိုးခြင်းကပြcauseနာများဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု EFF ကပြောကြားခဲ့သည်
အီလက်ထရွန် ၁၂.၀.၀ သည်ခရိုမီယမ် ၈၉၊ APIs အသစ်နှင့်အခြားအရာများအပေါ် အခြေခံ၍ ရောက်ရှိသည်